को हुन् जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगा ?:: Naya Nepal
को हुन् जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री योसिहिडे सुगा ?
काठमाडौं । जापानको सत्तारुढ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी)ले सिन्जो आबेको स्थानमा योसिहिडे सुगालाई आफ्नो पार्टीको नेता बनाएका छन् । यससँगै अब उनी जापानको प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ ।
गत महिना आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा राम्रो नभएको भन्दै सिन्जो आबेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ७१ वर्षीय सुगा आबेको निकट मानिन्छन् । सोमबार आफ्नो पार्टीभित्र भएको मतदानको क्रममा सुगाले ५३४ मध्ये ३७७ मत पाएका थिए ।
हुन् योसिहिडे सुगा ?